Mpempe akwụkwọ na ederede Echi, Santa Claus bịara ibipụta
Echi abia Santa Claus - ihe ederede na ederede
Echi abia ederede Santa Claus
Mpempe akwụkwọ na ederede Echi abia Santa Claus
Echi bụ Santa Claus na-abịa
abịa na onyinye ya.
Ucha dị ọkụ, ihe ịchọ mma ọlaọcha,
Ụmụaka na ụlọ, atụrụ na oke ehi,
Shaggy bear na panther
Ọ ga-amasị m ịnwe.
Were anyị Santa,
Were ya echi, weta ya
ezigbo ụgbọ okporo ígwè,
Ugbo na ọkụkọ na akwa,
a gingerbread nwoke,
ihe niile dị mma.
Ma ị maara ọchịchọ anyị,
mara obi anyi.
Ụmụaka nna na mama,
ọbụna nna nna,
onye ọ bụla, anyị niile nọ n'ebe ahụ,
chere gị ihe mgbu.
Ihe edere site na Christmas Carol Echi, Santa Claus ga-emeghe dịka faịlụ dị egwu
Ebee ka snow si abịa? ụmụaka ajụjụ
Akwụkwọ agba agba Krismas - Santa Claus